के हो स्कुल बस काण्ड ? कसरी भयो यस्तो ? (भिडियो हेर्नुहोस)
नेपालमा पछिल्लो समय देशमा आपराधिक घटनाहरु धेरै हुने गरेको छ। कतै मानिसको अपहरण, कतै निर्मम दुर्घटना त कतै मानविय सम्बेदना पनि नराखी हत्या । यस्ता घटना अहिले नेपाल र नेपाली समाजमा पनि मौलाएर गएका छन । नेपालमा यति धेरै अपराधीक क्रियाकलाप बढेको छ । दैनिक सुनिने यस्ता घटनाले गर्दा मानिसलाई हत्या हिसा जस्ता जघन्य अपराधको समाचार सुन्दा पनि अनौठो मान्न छाडिसके । यस्तै मानिसको ज्यान लिने अर्को डरलाग्दो घटना हो सडक दुर्घटना । सडक दुर्घटनाका कारण धेरैले ज्यान गुमाएका छन । हालै काठमाडौंमा एक स्कुल बसले साढे दुई बर्षको बच्चाको ज्यान लिएको छ । प्रत्येक्षदर्शीका अनुसार पहिले ठक्कर दिएर पछि फेरि ब्याक गरेर किचेर घटना भएको बताईएको छ। उक्त घटना पछि अहिले स्थानिय आक्रोशीत बनेका छन। थप हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।